वेनिशा हमालले फिर्ता गरिन् दुबई अवार्ड « Ramailo छ
वेनिशा हमालले फिर्ता गरिन् दुबई अवार्ड
मोडल तथा नायिका वेनिशा हमालले आफुले पाएको अवार्डको ट्रफी फिर्ता गरेकी छन् । हालै दुबईमा सम्पन्न म्युजिक भिडियो अवार्डमा वेनिशालाई पपुलर अभिनेत्रीको अवार्ड दिइएको थियो । उनले आफुले पाएको उक्त अवार्डको ट्रफी आयोजक सदस्यलाई नै फिर्ता गरेको बताइन् । किन त ?
‘म पपुलर अभिनेत्रीमा पर्दिंन । त्यसैले अपुलर अवार्ड लिन उचित लागेन’, वेनिशाले भनिन्, ‘अवार्ड जसले पाउनु पर्ने हो उसले पो पाउनु पर्छ त ।’ उसो त वेनिशा उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडलको विधामा पनि नोमिनेशनमा परेकी थिइँन । तर यो विधाको अवार्ड नम्रता सापकोटाले पाइन् । ‘मैंले उसलाई बधाई पनि दिएँ । तर म चाहिं त्यो विधाको लायक थिइँन ।’ यद्पी आयोजकले आफुलाई फिर्ता गरेको ट्रफी थमाएको उनले बताइन् । पाएको अवार्ड फिर्ता गर्न किन गइन् त वेनिशा दुबई ?
‘मलाई कुनै विधामा अवार्ड नदिएको भएपनि हुन्थ्यो । जुन विधामा दिइयो, त्यो विधामा म आफुलाई अवार्डको भागिदार ठान्दिंन’, उनले भनिन् । सबैलाई खुसी पार्न अवार्ड नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नु पर्ने बताउँदै वेनिशा थप्छिन्, ‘कमसेकम अवार्डको ईज्जत त राखौं !’
विदशेमा आयोजना हुने सबै जसो अवार्ड नपाउने कम र पाउने ज्यादा हुन्छन् । दुवईमा सम्पन्न म्युजिक भिडियो अवार्डमा पनि यो चलनले निरञ्तरता पायो ।